कर्णालीमा लैंगिक बहस
२८ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा लैंगिक बहस शुरु भएको छ । पत्रकार बबिता बस्नेतको सहजीकरणमा सुर्खेतमा कार्यरत मिडियाकर्मीहरुबीच उक्त बहस भएको हो । सञ्चारिका समूह कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा सञ्चालित २ दिने लैंगिक संवेदनशील पत्रकारिता तालिममा सहभागीहरुले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न…
डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चार लाख घुससहित पक्राउ
२७ असार, सुर्खेत । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख (डिएफओ) भक्तबहादुर लामा चार लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । विशेष सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतको टोलीले लामालाई शुक्रवार कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो । वनको काठ निकासीको म्याद थप गरिदिने…
बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति ८ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ
२६ असार । धरानस्थिन बिपी कोइरला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार ८ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । काठमाडौँबाट गएको अख्त्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई बिहीबार धरानबाट घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो । उनीसँगै डा. रामहरि…
सुर्खेतबाट विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ
२५ असार । विप्लव नेतृत्व नेकपाको युवा संगठनका नेता पक्राउ परेका छन् । युथ फोर्स सुर्खेतका इञ्चार्ज समेत रहेका शिखर परियार पहाडी ‘हिमशिखर’ लाई प्रहरीले मंगलबार राति पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीका अनुसार राति…
२५ असार । भोजपुरमा प्रहरी र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ताबीच साेमबार गोली हानाहान भएको छ। विप्लवका कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर एक जना प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ भने जवाफी कारबाहीमा एक जना विप्लवका कार्यकर्ताको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको…
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन, स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो
१६ असार । स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए संगै लोकसेवाबाट विज्ञापन भएका ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्नाको बाटो खुलेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलाशले सो…
पार्टी एकताका सवै काम असार भित्र टुंगिन्छ : प्रधानमन्त्री (भिडियो)
१४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही असार भित्र पार्टी एकताका सबै काम टुंगिने जानकारी दिए । जननेता मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित बिचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता ठुलो काम…
कर्णालीको बजेट असन्तुलीत भएको प्रति सांसद विष्टको आक्रोस : प्रतिपक्षले लेनदेनमा सम्झौता गरेको आरोप (भिडियो)
११ असार । कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य ठम्मर विष्टले कर्णालीको बजेट असन्तुलीत भएको आरोप लगाएका छन् । सक्तापक्षका सांसद समेत रहेका विष्टले बजेट मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको ईसरामा चलेको आरोप लगाए । पर्यटन क्षेत्रको विकासमा चरम लापरबाही भएको भन्दै २४…
१० असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी सुर्खेतका अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको समेत पाँचौ नगरसभा र गाउँसभा शुभारम्व भएको छ । जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने स्थानीय सरकारले विकास पूर्वाधार, शिक्षा,…
एड्भोकेसी फोरमद्वारा यातना सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१८ सार्वजनिक
१० असार । एड्भोकेसी फोरम नेपालले यातना विरुद्धको प्रतिवेदन २०१८ सार्वजनिक गरेको छ । एड्भोकेसी फोरमका अनुसार विगतका वर्षहरु भन्दा यस वर्ष यातनाका घटनाहरुमा पाँच प्रतिशतमा बृद्धि भएको जनाएको छ । सन् २०१८ मा एड्भोकेसी फोरमले ११६५ जना थुनुवाहरुको अन्र्तवार्ता लिई प्रतिवदेदन सार्वजनिक गरेको…